AdSense: Ahoana ny fomba hanesorana faritra iray amin'ny doka Auto | Martech Zone
AdSense: Ahoana ny fomba hanesorana faritra iray amin'ny doka Auto
Tsy isalasalana fa misy olona mitsidika ny tranokalako tsy mahatsapa fa manangom-bola amin'ny Google Adsense aho. Tadidiko ny fotoana vao nahare ny famaritana Adsense, hoy ilay olona fa izy io Webmaster Welfare. Manaiky aho, tsy manarona ny vidin'ny fampiantranoana ahy akory. Na izany aza, tiako ny manonitra ny vidin'ny tranokalako ary i Adsense dia lasibatra tsara amin'ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny dokam-barotra mifandraika amin'izany.
Izany dia nilaza fa rehefa niverina kelikely aho dia nanova ny toe-javatra Adsense nataoko tamin'ny fanesorana ireo faritra rehetra misy ao amin'ny tranokalako ary, hamelana ny Adsense hanatsara ny toerana nametrahany doka.
Navelako ny Adsense hanatsara ny fametrahana doka mandritra ny volana vitsivitsy ary nahita fiakarana kely tamin'ny vola miditra isam-bolana. Na izany aza, ny sora-baventy apetrak'i Google ambony tena maharikoriko tanteraka ny galeriko misy ny lahatsoratro:
Mifanohitra amin'izay eritreretinao, Auto doka mamela anao hifehy ny faritra sy ny isan'ny doka apetrak'i Google eo amin'ny tranokalanao. Raha miditra amin'ny Google Adsense ianao dia safidio Doka> Topimaso:
Eo amin'ny tontonana ankavanana, misy bokotra fanovana eo amin'ny publication. Rehefa tsindrio io bokotra io dia misokatra ilay pejy miaraka amin'ny biraonao sy ny kinova findainao amin'ny tranokalanao izay ahitanao ny toerana ametrahan'ny Google ny doka. Ary, ny tsara indrindra, azonao atao ny manala ilay faritra tanteraka. Izany dia nataoko tamin'ny sora-baventy lohan-doha maharikoriko izay nandray ny tranokalako manontolo.
Na dia mety mitondra fidiram-bola tsindry bebe kokoa aza io faneva io, mahatsiravina ny traikefan'ny mpampiasa ahy ary mahatonga ahy ho toy ny spam fotsiny aho manandrana manamboatra vola. Nesoriko ny faritra.
Notsipiko ho 4 ihany koa ny doka farafahakeliny isaky ny pejy 4. Ho hitanao izany ao amin'ny fizarana Ad Load eo amin'ny ankavanana sy ny sisiny. XNUMX no kely indrindra avelan'izy ireo hisafidy.
Misy safidy hafa azonao atao ary alefaso amin'ny tranokalanao, ao anatin'izany ny doka anaty pejy, ny atiny mifanentana, ny doka vatofantsika, ary ny doka vignette izay doka feno hita eo anelanelan'ny enta-mavesatry ny pejy.
Amin'ny maha mpitory ahy manome fikarohana sy fampahalalana maimaim-poana taonina, manantena aho fa tsy mampaninona anao ny manome vola ny tranokalako. Mandritra izany fotoana izany, tena tsy te-hampahatezitra olona aho ary manakana azy ireo tsy hiverina!
Tags: doka fiaragoogle adsenseahoana novola ny publicationmandoa isaky ny kitihoesory ny faritra